Girazi Spigot Vagadziri uye Vatengesi - China Girazi Spigot Fekitori
Oval Deck Yakakwira Spigot, Kukanda kwekuvaka Hardware accessories
Iyo hunyanzvi yakakwira muIndia nepakati peAsia kutanga, kudzamara yaonekwa kuchamhembe kweEurope kutenderedza 800 CE, kwayakashandiswa kugadzira mapfumo eViking. Iyo hunyanzvi haina kumuka zvakare kusvika 1750 apo Benjamin Huntsman akaidzorerazve muEngland.
Round Core Drill Spigot, Hardware zvishongedzo
Iyo nzira yekurovera, nzira inoshandiswa kugadzira yakanaka kana chishandiso simbi, yakaonekwa uye yakanyangarika munzvimbo dzakasiyana kutenderera pasirese kubva pakutanga kwemireniyamu CE.
Round Deck Yakakwidzwa Spigot, isina simbi spigot
Round girazi spigot isina base, girazi spigot kukanda zvishongedzo
Pombi dzesimbi dzinokandwa dzinofanira kuramba ngura uye kumanikidza kwakanyanya. Zvimwe zvikamu zvinokandwa zvinofanirwa kunge zvisina kureruka asi zvichikosha. Mune akawanda mashandisirwo, zvikamu zvakagadzirirwa kubvumidza chaiyo shiviriro pakati pekuwedzera nekudzvinyirira.
Rutivi Rwakagadzika Spigot
Mumazana emakore ese, musanganiswa wakasiyana siyana wezvigadzirwa wakagadzirwa kuti ubudise marudzi esimbi. Zvimwe zvinogadzirwa zvinoshandiswa muinjini dzinoda shiviriro yakakwira yekupisa uye kutonhora.